Lalao 7 sy fampiharana maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra (18 Janoary) | Vaovao IPhone
Lalao sy fampiharana 7 maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra (18 Janoary)
Jose Alfocea | | fivarotana
Efa manakaiky ny antsasaky ny herinandro isika, izay fotoana izay hahatonga ny tsy faharetana amin'ny zoma ary hitahiry ny asa dia manomboka mihamafy. Mba hahamora kokoa ny fiandrasana, anio dia manome safidy vaovao izahay Lalao sy rindranasa izay aloa, fa izao dia afaka hanana amin'ny iPhone na iPad anao maimaimpoana ianao.
Tsarovy fa ny fampiroboroboana sy ny tolotra rehetra hasehoko anao eto ambany dia Fotoana voafetra, izany hoe, tsy afaka manome toky fotsiny aho hoe manan-kery izy ireo amin'ny fotoana namoahanay ity lahatsoratra ity, saingy tsy haiko hoe rahoviana no hampiala azy ireo avy amin'ireo mpamorona mifanaraka amin'izany. Noho izany, rehefa heverina fa afaka izy ireo, misintona aloha dia mieritrereta avy eo. Fa maika !!
1 Piano Friend Chords and Scales
2 Lalao Princess
3 Akoho moana: mpamonjy sakaiza
4 PhotoJus Grunge FX Pro - Pic Effect ho an'ny Instagram
6 Circle of Master faha-5, Fanontana faha-2
7 Cloud Hub - Mpitantana rakitra, mpamaky antontan-taratasy, Browser
Piano Friend Chords and Scales
Raha fantatrao sy tianao ny mitendry piano, dia iray amin'ireo fampiharana tianao io. «Piano Friend dia mpiara-miasa mahafinaritra iray rehefa manana piano«. Noho ity fampiharana ity dia afaka mitady haingana sy haingana ny "chords piano, mizana mizana, naoty an'ny mpiasa ianao ary hiditra amin'ny metronomika matanjaka, izy rehetra dia misy interface mora ampiasaina."
Ny vidiny mahazatra an'ny Piano Friend Chords and Scales 0,99 euro izany nefa izao azonao atao maimaim-poana tanteraka, mandritra ny fotoana voafetra.
Na dia nohafoheziko aza izany, araka ny ho hitanao etsy ambany dia heveriko fa amin'ny anarana tsotra kokoa dia ho ampy ihany koa ny hamaritana an'ity lalao andriambavy mifototra amin'ny piozila izay an'ny sehatry ny fanabeazana ary mikendry ny kely indrindra amin'ny trano, zazalahy sy zazavavy hatramin'ny dimy taona.
Ampio ny andriambavy hanangana tontolo nofinofy mahagaga. Rehefa miseho ny sehatra tsirairay dia miseho ireo tarehin-tsoratra sy zavatra mifampiresaka vaovao!
Ny vidin'ity lalao fanabeazana ity dia 2,99 euro, kanefa izao dia azonao atao maimaim-poana tanteraka izany, mandritra ny fotoana voafetra.
Lalao Princess for Girls Unicorn Ankizy piozila€ 3,49
Akoho moana: mpamonjy sakaiza
Amin'ity lalao ity dia horaisinao ny toetran'ny akoho nalaina an-keriny. Ho afa-mandositra ianao, fa koa tsy maintsy manampy ny sisa amin'ireo akoho namanao ianao handositra ireo biby goavambe fa tazonina izy ireo.
Ny vidiny mahazatra an'ny Akoho moana: mpamonjy sakaiza 0,99 euro izany nefa izao azonao atao maimaim-poana tanteraka, mandritra ny fotoana voafetra.
PhotoJus Grunge FX Pro - Pic Effect ho an'ny Instagram
Amin'ity indray mitoraka ity dia mahita fampiharana fanovana sary mamela anay izahay ampio ireo vokarin'ny grunge noforonin'ireo mpaka sary sy mpanakanto matihanina amin'ny sarinay amin'izay izy ireo dia tsara kokoa amin'ny Instagram na tambajotra sosialy hafa.
Ny vidiny mahazatra an'ny PhotoJus Grunge FX Pro 2,99 euro izany nefa izao azonao atao maimaim-poana tanteraka, mandritra ny fotoana voafetra.
PhotoJus Grunge FX Pro€ 3,49
Miaraka amin'ity fampiharana ity ianaro ny fototry ny fiteny markup hypertext sy ny lambam-panoratana cascading.
Ny vidiny mahazatra an'ny Fitsipika momba ny famolavolana tranonkala - Kaody HTML sy CSS 0,99 euro izany nefa izao azonao atao maimaim-poana tanteraka, mandritra ny fotoana voafetra.
Circle of Master faha-5, Fanontana faha-2
Ny vidiny mahazatra an'ny Circle of Master faha-5, Fanontana faha-2 1,99 euro izany nefa izao azonao atao maimaim-poana tanteraka, mandritra ny fotoana voafetra.
Cloud Hub - Mpitantana rakitra, mpamaky antontan-taratasy, Browser
Cloud Hub dia fitaovana mahasoa mamela anao mampiray ny serivisy fitehirizan-drakitrao amin'ny fampiharana iray.
Miaraka amin'ny Cloud Hub dia azonao atao ny mampakatra sy misintona rakitra amin'ny Box, Dropbox, OneDrive, Drive, iCloud, ary koa «mitantana ireo rakitra rehetra ao an-toerana voatahiry ao amin'ilay fampiharana: soloy anarana, afindra, kopia, fafao, mamorona lahatahiry, jereo ny atin'ny karazana Common fisie fisie toy ny PDF, PNG, JPG, MP4, iWork, MS Office fisie ».
Ary mazava ho azy, azonao atao koa ny mizara ny fisieo amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy toy ny Facebook, Twitter, sns.
Ny vidiny mahazatra an'ny Cloud Hub - Mpitantana rakitra, mpamaky antontan-taratasy, Browser 0,99 euro izany nefa izao azonao atao maimaim-poana tanteraka, mandritra ny fotoana voafetra.
Cloud Hub - Mpitantana rakitra, mpamaky antontan-taratasy, Browsermaimaim-poana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » fivarotana » Lalao sy fampiharana 7 maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra (18 Janoary)
Ny famantaranandro Android Wear 2.0 voalohany dia mindrana ny Digital Crown amin'ny Apple Watch
Mahazo haingam-pandeha i Evernote miaraka amin'ny kinova vaovao